Haweeney Daacish ah ‘oo canug yar ku eegatay inuu oon ugu dhinto’ Ciraaq - BBC News Somali
Daacish ayaa waxa ay magaalada Muusil qabsatay 2014
27-jirkan u dhalatay dalka Jarmalka oo lagu magacaabo Jennifer W, ayaa ninkeeda waxa uu canugta yar u keensaday 'adoonsi' magaalada Muusil ee dalka ee uu gacanta ku hayay ururka la baxay Dowladda Islaamiga ah sanadku markuu ahaa 2015.
Ninka Jennifer ayaa waxa uu gabadha ku katiinadeeyay bannaanka kaddib markii ay xanuunsatay Jennifer W-na ma ay badbaadin, dacwad oogayaasha ayaa sidaasi sheegay.
Sidoo kale waxa ay wajahaysaa dacwado ah inay dilgaysatay iyo inay hub dambi ku gaysatay.
Haddii lagu helo dambiyada loo haysto ee ay qaadayso maxkamadda qaadda falalka argagixisada ee magaalada Munich waxa ay wajahaysaa xabsi daa'im.
Abuu Bakar Al Baqdadi oo cajalad cusub soo duubay
Maxaa loo aamini la'yahay Mukhtaar Rooboow (Abuu Mansuur)?
Gabadha shan sanno jirka aheyd waxa ay ka mid aheyd maxaabiis dagaal oo Jennifer W iyo ninkeeda ay soo kaxaysteen.
Warbaahinta Jarmalka ayaa waxa ay ku warramaysaa in gabadhu ay u badan tahay inay ka tirsaneyd qowmiyadda laga tirada badan yahay ee Yazidi, qowmiyaddaas oo intooda badan ay qabsadeen adoonsi ahaanna u haysteen maleeshiyaadka ururka la baxay Dowladda Islaamiga ah markii ay 2014 la wareegeen waqooyiga Ciraaq.
"Markii ay gabadhu xanuunsatay oo ay qoysay joodaragii ay ku jiiftay, ninka haweeneydan eedaysan ayaa waxa uu ku katiinadeeyay bannaanka si uu u ciqaabo sidaasna gabadhii yareyd waxa ay ugu dhimatay oon xilli qoraxduna ay aad u kululeyd," ayey dacwad oogayaashu ku sheegeen bayaan ay soo saareen.
"Haweeneyda eedaysan waxa ay ogolaatay in ninkeedu uu sidaas sameeyo mana aysan jirin wax ay gabadhaasi ku badbaadinayso,"
Jennifer W waxa ay waddanka Ciraaq u kicitintay 2014, markaas oo ay xubin ka noqotay ururka Daacish, waxaa lagu sheegay eedaymaha ka dhanka ah.
Shaqadeedu waxa ay aheyd inay gaaf wareegto goobaha lagu nasto ee magaalada Muusil iyo magaalada kale ee ay Daacish ka talinaysay ee Falluujah, waxa ayna ku hubaysneyd AK47, bastoolad iyo suun laga soo buuxiyay walxaha qarxa, dacwad oogayaasha ayaa sheegay.
"Shaqadeedu waxa ay aheyd inay xaqiijiso in haweenku ay raacaan dhaqanka iyo shuruucda labiska ee ururkaasi argagixisada ah," bayaanka ayaa lagu sheegay.
Xubno sarsare oo ka tirsan Daacish oo lagu qabtay Kaabuul
'Aabihii Taalibaanka' oo lagu dilay Pakistan
Daacish oo qabsatay magaalada Palmyra
Jennifer W waxaa xiray booliska Turkiga bilooyin kaddib markii geerida gabadha markaas oo ay booqanaysay safaaradda Jarmalka uu ku leeyahay magaalada Ankara si ay warqadaheeda aqoonsiga u soo cusboonaysiisato.
Waxaa loo dhoofiyay Jarmalka, halkaas oo markii hore loo ogolaaday inay dib ugu laabato gurigeeda sababtoo ah ma aanay jirin caddeymo loo hayay falalka ay gaysatay.
Booliska Jarmalka ayaa haddaba waxa ay xireen bishii Juun mar ay isku dayaysay inay u safarto waddanka Suuriya, tan iyo markaana waa ay xirneyd.
Ilaa iyo haatanna taariikh looma qaban dhageysiga dawcadda loo haysto.
Magaalada Muusil ayaa sanadkii hore waxaa laga xoreeray Daacish kaddib saddex sanadood oo ay halkaas ka talinayeen, kooxduna haatan waxaa lagala wareegay ku dhawaad dhammaan deegaannadii ay ka talin jirtay ee Ciraaq iyo Suuriya.
Erdogan "xanaaqiisa" wuxuu dhib u keenayaa Turkiga
Howlgalkii 'lagu dili rabay' hoggaamiyihii Al-Shabaab ee mar lasoo shaqeeyay telefishinka Al Jaziira
27 Oktoobar 2021
Iska ilaali siddeed cunto oo sababi kara gaaska caloosha iyo dhibaatooyin kale
'Waxaan dib ugu laabtay seygeygii Boko Xaaraam ka tirsanaa ee jaceylka iyo naxariista i tusay'
"Boqorkii hore ee Sacuudiga ee lagu dili rabay faraantiga sumeysan"